Na dia mihoatra noho ny fitaomana mivantana avy amin'ny fitantanana eo an-toerana aza ny anton'ny fandotoana haran-dranomasina, dia manana andraikitra lehibe ny mpitantana ny haran-dranomasina alohan'ny, mandritra ary aorian'ny hetsika fanafoanana.
Ny mpitantana dia mety hanana andraikitra isan-karazany mifandraika amin'ny hetsika fanalefahana ao anatin'izany: maminavina sy mampita ny loza mety hitranga, mandrefy ny fiantraikany, mahatakatra ny fiantraikan'ny faharesen'ny haran-dranomasina, ary mampihatra ny valin'ny fitantanana mba hampihenana ny hamafin'ny fahasimbana sy/na hanampy amin'ny fanarenana ny haran-dranomasina.
Tabilao 2.1 Ohatra amin'ny asa avy amin'ny sokajy efatra amin'ny hetsika famafazana fanamainana eo ambanin'ny toe-javatra misy loharano telo samihafa avy amin'ny Torolàlana ho an'ny Mpitantana ny haran-dranomasina ho an'ny fandotoana vato harana (2006)
Drafitry ny valin'ny fanafoanana vato harana novolavolain'ny Great Barrier Reef Marine Park Authority (GBMPA) any Aostralia. Loharano: GBRMPA 2011
Ny fandrindrana mialoha alohan'ny hetsika fanasan-damba dia ahafahan'ny mpitantana mamaly haingana rehefa misy ny fanalefahana. Tena ilaina ny manomana mialoha ho an'ny mpiasa, ny famatsiam-bola, ny fifandraisana ary ny fanaraha-maso. Ny fananana drafitra napetraka dia hanampy ny mpitantana hahazo fahatokisana sy fanohanana ara-politika miaraka amin'ireo mpampiasa haran-dranomasina sy mpanapa-kevitra. Rehefa mamolavola drafitra famaliana fanafoanana dia zava-dehibe ny hampidirana ireo mpandray anjara sy mpiara-miombon'antoka mifandraika amin'izany, ary koa ireo manampahefana ambony ao anatin'ny fikambanana mpitantana. Ny famaritana mazava tsara ny anjara andraikiny sy ny andraikitry ny fikambanana sy ny olona rehetra tafiditra amin'ny valinteny dia zava-dehibe ihany koa amin'ny fahombiazan'ny drafitra iray.
Indray mandeha ny haran-dranomasina iray dia nisy fiantraikany tamin'ny fitrandrahana haran-dranomasina, mety maniry ny handinika ireo mpitantana misokatra amin'ny varavarankely vaovaofanaraha-maso ny fitantanana eo an-toerana or misokatra amin'ny varavarankely vaovaotetik'ady famerenana amin'ny laoniny mba hanohanana ireo fitsaboana fanarenana. Na izany aza, ny hetsika fanangonam-bozaka dia matetika dia mipoitra amin'ny haben'ny ampahatelon'ny kilometatra an-jatony kilometatra, mamerina ny laoniny ho lafo sy sarotra - raha tsy vita izany - ny fahatsinjovana.
Ny Reef Resilience Network dia namolavola a misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFanampiana Hisaintsainamanokatra fisie PDF mba hitari-dalana ny mpitantana amin'ny alàlan'ny famolavolana drafitra an-dalambe. Ity fitaovana ity dia afaka manampy ireo mpitantana handinika olana maro izay manohana ny valinteny, anisan'izany:
Fanombanana ny fiantraika ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy sy ara-toekarena ateraky ny fanamainana faobe
Fifandraisana momba ny fanasan-damba faobe mialoha, mandritra ary aorian'ny hetsika
Manara-maso sy maminavina ny fandotoana vato harana
Ny faminaniany ny fisehoan-javatra fandotoana vatohara faobe dia dingana iray lehibe amin'ny drafitry ny valin'ny fanalana haran-dranomasina. Misy karazana faminavina sy fitaovana fanaraha-maso momba ny fanamainana haran-dranomasina isan-karazany izao ho an'ny mpitantana ao anatin'izany:
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNOAA's Coral Reef Watch
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoAllen Coral Atlas
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy tatitry ny UNEP 2020 sy ny efitranon'ny tontolo iainana manerantany
Raha mila fanazavana fanampiny momba ireo fitaovana ireo dia jereo ny pejy ao hetsika fanasan-damba faobe.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTorolàlana ho an'ny Coral Bleaching amin'ny torolàlana momba ny haran-dranomasinamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoDrafitry ny valin-kafatra momba ny fanafoanana ny haran-dranomasina Great Barrier Reefmanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoDrafitry ny valin-kafatra amin'ny famafazana vatohara any Florida Reef Tractmanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoCoral Reef Resilience Online Course, Lesona 6: Paikady fitantanana ho an'ny faharetana